I-Spundge: Ukuhlanganiswa kokuqukethwe kokubambisana kwamaqembu | Martech Zone
I-Spundge: Ukuhlanganiswa kokuqukethwe kokubambisana kwamaqembu
NgoMgqibelo, July 13, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Spundge kwenza kube lula ukulandelela imininingwane ehamba phambili, ulwazi lwe-distill, ukwakha imibono ephoqelelayo, nokwakha okuqukethwe okunethonya. Banakho kokubili inguqulo yamahhala nenguqulo yobungcweti yesikhulumi sabo. Spundge PRO iyipulatifomu yokuqukethwe enika amandla amaqembu nabantu ukuthola, ukuphatha, ukudala nokusabalalisa okuqukethwe okubandakanya, okunethonya.
ISpundge ikuvumela ukuthi:
ithrekhi - Gcina umbhalo walokho okuqukethwe okuhle kakhulu, okuhlelwe kahle kwaba Izincwadi Zamabhuku ngezihloko, imicimbi, abantu noma yisiphi isakhiwo esifanelana nezidingo zakho. Isandiso sesiphequluli seSpundge sizophakamisa nezincwajana ezingcono kakhulu zezinkomba ozithola ku-inthanethi.
Hlunga - Yonke imithombo ihlangana ngaphakathi kweSpundge Notebooks njengomsakazo owodwa ohlungiwe wesikhathi sangempela wokuqukethwe okuhambisanayo. Zama lokhu kanye futhi uzobona ukuthi kusindisa isikhathi esingakanani.
Bambisana - Izincwadi zokubhalela zeSpundge ezenhlalo nezokubambisana, zikuvumela ukuthi ufunde nabasizi abanikelayo abanezintshisakalo ezabiwe. Abalandeli nabanikeli bathola inhlabamkhosi efomethwe yokuqukethwe ekhethwe yiqembu, igcina wonke umuntu evumelanisiwe.
Bona izinzuzo zokusebenzisa isisombululo sokugcina esenzelwe abadali, abashicileli nabakhangisi engqondweni ngezici ezilandelayo nezinzuzo zohlobo lwabo lobuchwepheshe:
Ukusebenzisana Okuthuthukile - Abasebenzisi beSpundge PRO bangasebenza ndawonye ukusebenzisana ezindabeni nasezincwadini zokubhalela. Lokhu kukuvumela ukuthi uhwebe kalula okusalungiswa, ufake imibono nokuhlela, ubuke izibuyekezo futhi ulandele inqubekela phambili.
Imithombo Yokuqukethwe Ochwepheshe - Abasebenzisi beSpundge PRO bayazuza ohlwini olukhulayo futhi olukhethiwe lokuqukethwe ama-Firehoses akhelwe ikakhulukazi ochwepheshe. Thola isithombe esifanele izindatshana zakho noma i-athikili ephelele ongasishicilela kabusha, ngokuchofoza okumbalwa nje, nakho konke ngaphakathi kokuhamba komsebenzi okuphelele okukodwa.
Inqubomgomo - Gcina lonke ucwaningo lwakho nokuqukethwe endaweni eyodwa, ephephile futhi elula. Izincwadi zakho zokubhalela ze-Spundge PRO nezindaba kungenziwa kube yimfihlo ngokufinyelela okuphephile kubahlanganyeli, noma kwamehlo akho kuphela.
Ukudalwa kokuqukethwe - I-Spundge PRO ikunikeza isihleli sokuqukethwe esikuvumela ukuthi uhudule ngokushesha bese uphonsa ama-tweets, izithombe, imisindo yeziqeshana, izethulo ezisebenzisanayo namavidiyo ungene endabeni yakho. Inikeza ukufinyelela okusheshayo, okulula kwezixhumanisi ezilondoloziwe nocwaningo kuma-Notebooks ngenkathi ubhala.
Isichasiso Esihlakaniphile - USpundge ungeza ngokuzenzakalela isichasiso lapho ukopisha unamathisela noma uhudula bese uphonsa izinto ezincwadini zokubhalela. Iphinde ilayishe ama-URL kuqala uma uxhuma kokuqukethwe kwangaphandle. I-Spundge iyasebenza, inesimilo futhi inetiquette enobungane.
Ukuhlanganiswa kweBlast - Bhala ku-Spundge, shicilela noma yikuphi. Izindaba ezibhalwe ku-Spundge zingahlanganiswa ngokushesha ukushicilela ku-CMS efana ne-WordPress, noma njengencwadi ye-imeyili nge-MailChimp. Ungahlela futhi uhlele ama-tweets kanye nokuvuselelwa kwe-Facebook ngasikhathi sinye. Bhala kanye, bese uhlanganisa okuqukethwe lapho kudinga ukuya khona.
Ukushumeka nezibalo - Izindaba zeSpundge nazo zingashumekelwa kunoma iyiphi iwebhusayithi. Lokhu kunikeza enye inketho yokwabelana kalula nokushicilela okuqukethwe. Ukusekelwa okwakhelwe ngaphakathi kwe-Google Analytics kukuvumela ukuthi ulandelele okuqukethwe kwakho.
Cindezela Ukubuyekeza - Abasebenzisi be-Pro bayazuza kuzibuyekezo ezisheshayo ezincwadini zokubhalela ezifakiwe nezindaba. Izinguquko zidonswa ngesikhathi sangempela yonke indawo lapho okuqukethwe kwakho kushumekwe khona.
Imithombo Engokwezifiso - Yiba nokuqukethwe kokuqukethwe okuyimfihlo noma API ufuna ukunika amandla kuma-Notebooks? Abasebenzisi beSpundge PRO bangangeza kalula imithombo yolwazi lwangokwezifiso. Lokhu kuhlomisa iqembu lakho ngendlela ephumelela kakhudlwana yokuskena izintambo, ukubheka izingobo zomlando zangaphakathi nokufinyelela kulwazi lwemininingwane yezithombe. Sizokusiza nokuthi usethe ngokushesha.
I-PS: Yini ngama-turtlenecks amakhulu kule vidiyo?
Tags: isenzoizibalo zokuqukethweukusebenzisana kokuqukethweukukhishwa kokuqukethweukushumeka kokuqukethweukuhlunga okuqukethweimithombo yokuqukethweukuhlanganiswa kokuqukethwekokulandela kokuqukethwephusha izibuyekezoukukhafulashaya pro
Umthelela Wezokuxhumana Komphakathi Kwezentengiselwano
UKUTHI UNGABHEKI KUNJANI Kuthonya, i-Blogger, noma Intatheli